E-India: Ababhikishi Bakhombisa Ukusekelwa kweHong Kong kwiWizard Match - T mov RELAY
Accueil » International I-India: Amademoni akhombisa ukwesekwa kweHong Kong ngesikhathi somdlalo wizard
ENdiya: Ababhikishi bakhombisa ukusekela iHong Kong ngesikhathi somdlalo wizard
Abakhombisi basabalalisa izikibha namakhodi omkhiqizo bavunyelwe i-Hong Kong NgoLwesithathu ebusuku lapho abathakathi abavela eWashington bephatha iqembu elivela ku Inhlangano ye-Basketball yaseChina .
Ama-Wizards anqobile Amabhubesi Amade eGuangzhou I-137-98 kumdlalo ohlanganisa imibhikisho engaphezu kwesigamu phakathi kwe-Capital One Arena ephikisana nokuhlukaniswa kwe-NBA okukhona manje nohulumeni waseChina.
Ababhikishi basakaze izikibha ze- "Free Hong Kong" emgwaqweni ngaphandle kwenkundla ngaphambi komdlalo wokubukisa. Ababhikishi, abathi bangabenenkululeko yeNkululeko House, bakhwebe izimpawu bethi "Amahlazo ku-NBA," "iSouth Park ibilungile" no "Memo kwi-NBA: Nqubo ngaphambi kokuthola inzuzo! Akunakubalwa! I-United States iyayithanda iHong Kong. ''
Izinkinga phakathi kwe-NBA neChina zaqala ngemuva kwe AmaRobhothi aseHouston Imenenja-jikelele, uDaryl Morey, othumele i-tonto ngeledlule ekhombisa ukuxhasa kwakhe ababhikishi abamelene nohulumeni eHong Kong.
I-NBA ayizange ixolise ngokushiwo nguMorey.
Umkhulumeli weNkululeko House uthe amanye amalungu ahlele ukukhombisa ngaphakathi ngesikhathi somdlalo. Isikhulumeli seCommemorative Victims of Communism Foundation sithe iqembu lihlele ukusabalalisa izikibha ngaphakathi enkundleni ngesikhathi somdlalo ezigabeni ezihlukene eduze kwensimu.
Ngaphakathi enkundleni yemidlalo, bekunokuphazamiseka okuningana esixukwini.
Ngemuva komdlalo wengoma yesizwe yaseChinese, umlandeli wamemeza: “Inkululeko yokuzwakalisa! Inkululeko yokukhuluma! Mahhala Omunye umlandeli uthande iHong Kong yamahhala esuka esigabeni sesibili kwikota yesibili.
Ngemuva kwemizuzu embalwa, ezokuphepha zaya kumlandeli ophethe uphawu oluthi "Free Tibet" nomunye ophethe ifulegi laseTibetan. Ezokuphepha zazama ukuthatha isibonakaliso kanti nomlandeli wenqabile ukusishiya. Ezokuphepha wabe esezilandela ezihlalweni zazo futhi ephume esitsheni esingezansi.
Umqeqeshi kaWitch uScott Brooks uthe wezwa umbhikisho ekugcineni kwengoma yesizwe yaseChina.
"Ngaphandle kwalokho angizwanga," kusho uBrooks. "Bengigxile kulo mdlalo"
UBrooks uthe ubengakezwa ukuthi kukhona abadlali bakhe abakhuluma ngale mibhikisho futhi akakaze akhulume nabadlali bakhe.
Umkhulumeli weWizards esitatimendeni uthe: "Abasebenzi bezokuphepha basuse lezi zimpawu kusihlwa ngokuhambisana nenqubomgomo ekhona maqondana nezimpawu, amabhanela, amaphosta kanye namafulegi eCastle One Arena. Abekho abalandeli abamenyiwe ukuba bashiye umdlalo. ''
Isigameko esifanayo senzeke ePhiladelphia ngoLwesibili ngesikhathi somdlalo phakathi kweGuangzhou ne76ers. Ukuphepha kwenkundla kususe abalandeli ababili ngokubamba amakhodi nezinkulumo ezishayelelayo zeHong Kong.
UCJ Harris ulahlekelwe amaphuzu e-25 ekunqotshweni kweqembu laseChina.
Lokho okushiwo ngu-Amadou Thiam: "Ukubuyekezwa kabusha koMthethosisekelo kwenzeka esimweni sokuphepha esikhathazayo ..."
I-India: Benze kanjani laba badlali bekhilikithi eKashmir defy & # 039; ukukhiya
I-USA: Izinsimbi ezisindayo ezinjenge-arsenic nomthofu ezitholakala kuma-95% wokudla kwezingane, futhi zingalimaza i-IQ yengane yakho - IMPILO YOKUZIMA KWEMPILO
I-PSG yonyawo - i-PSG: I-Qatar ibeka intengo yeMbappé, i-colossal - FOOT 01